Chinese manhamba kubva 1 kusvika 100 uye madudziro avo - UniProyecta
Vanhu vazhinji vanobvuma kuti Mandarin Chinese ichava mumwe wemitauro yakakosha pamakore gumi anotevera nekuda kwekukura kukuru kweChina. Izvo zvataurwa, kana iwe uchifarira kudzidza mutauro, unogona kutanga nenhamba muChina, nekuti kudzidza kuverenga ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekutanga mumutauro.
Kana iwe wave kuda kushanyira nyika, pane mamwe mazwi akakosha aunofanirwa kugona usati wasvika kuti iwe ugone kuzviita kuti unzwisiswe, zvirinani zvinhu zvakakosha.
Sezvo nemitauro yese, kudzidza kudzidza nhamba dziri muchiChina chinhu chekutanga iwe chaunofanira kudzidza ndiwo ekutanga manhamba, ndokuti, dzidza kubva pa0 kusvika pa9, sezvo dzimwe nhamba dzakagadzirwa neizvi.
Tevere, ini ndichagovana tafura iyo iwe yaunogona kuona iyo nhamba, yayo Chinese chimiro uye dudziro yayo muchiSpanish, kuti iwe ugone kuwana zano nezve kududzwa kwenhamba. Chero nzira, unogona kushandisa muturikiri wepamhepo kuti udzidze kududza zvirinani zvishoma.
1 Chinese manhamba kubva 1 kusvika 10
2 Numeri 10 kusvika ku20
3 Mazana, zviuru nemamiriyoni muChinese
Chinese manhamba kubva 1 kusvika 10
Nhamba Chinese pinyin
1 Rimwe yī
2 Vaviri er
3 tatu mutsvene
4 zvina sì
5 Zvishanu wǔ
6 nhanhatu liù
7 Zvinomwe chii
8 Sere ba
9 pfumbamwe hee
10 gumi shi
Tinokurudzira kuti iwe upedze imwe nguva uchiyeuka manhamba uye kudzidzira madudziro avo. Paunenge iwe wava kugona ivo unogona kuenderera kune inotevera tafura:
Numeri 10 kusvika ku20
11 gumi neposhi shí yī
12 gumi nembiri Ehe iri
13 Gumi nematatu shí san
14 Makumi mana shi hongu
15 Gumi neshanu shi wǔ
16 Gumi nematanhatu shí liù
17 Makumi nemanomwe shi qī
18 Gumi nesere shí bā
19 Gumi nepfumbamwe shi hee
20 makumi maviri er shí
Sezvauri kuona mumatafura maviri, zvinoitwa kubva pa11 kusvika 19 kuisa gumi zvichiteverwa neyuniti. Semuenzaniso, kutaura gumi nembiri (shí ér) tanga na shí (10) ér (2).
Uyu mutemo unoshandiswa nenhamba zhinji muchiChinese. Semuenzaniso, kana iwe waida kuti makumi maviri nesere, zvese zvaunofanirwa kuita kutaura kuti "maviri, gumi, maviri" muchiChinese. Zviri nyore zvakakwana handizvo here?
Mazana, zviuru nemamiriyoni muChinese
200 二百 uye bǎi
1 000 chiuru yī qiān
1000 000 miriyoni yī bǎi wàn
100 000 000 一 亿 yi yi
Zvakawanda zvakafanana ndezvechokwadi kune akawanda manhamba. Semuenzaniso, kana iwe waida kuti 135, iwe unofanirwa kungoti 'imwe, zana, matatu, gumi uye mashanu'. Chokwadi pane mimwe mitemo uye kunze, asi kazhinji haufanirwe kunge uine dambudziko nenhamba dzeChinese. Pazasi takagadzirira vhidhiyo yakanyatsotsanangurwa mauri iwe yaunogona kunyatsonzwisisa nyaya yenhamba uye zvakare kune mutauri wechiChinese wekuzvarwa anobatsira nemadudzirwo enhamba dzeChinese.
Categories Chinese, Mitauro Kubatikiti kufamba
kudzidziswa » Mitauro » Chinese » Chinese manhamba kubva 1 kusvika 100
7 makomenti pa "Chinese nhamba kubva 1 kusvika 100"
Gumiguru 31, 2018 pa7: 21 am
zvinondikodzera, maita basa
Mbudzi 28, 2018 pa9: 53 pm
Ndinoifarira chaizvo .ndatenda
Kubvumbi 9, 2019 pa6: 25 pm
Pfupiso yakanaka kwazvo uye nyore kurangarira, yakakwana kune avo vari kutanga kudzidza ... seni 🙂
Chikumi 18, 2019 na2: 18 am
Nyamavhuvhu 31, 2019 pa1: 12 pm
Makadii !!! Nzvimbo yakanakisa, zvinondibatsira zvakanyanya kuti ndive nani, nekutenda neruzivo rwako rwese, ndokumbirawo urambe uchidaro
Nyamavhuvhu 20, 2019 pa3: 06 pm
Maoko anoshanda kwazvo, ndatenda
Nyamavhuvhu 27, 2019 pa1: 50 pm